Ronni Goldfarb - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga
Ronni Goldfarb waa aasaasaha EAI waxayna u shaqeysay awooda Madaxweynaha & Madaxa tan iyo markii la aasaasay EAI 2000 ilaa Janaayo 2018. Waqtigan xaadirka ah, waxay u adeegtaa Guddiga Agaasimayaasha EAI. Intii ay hoggaanka haysay, EAI waxay biloowday oo ay horumarisay himiladeeda iyo habka u gaarka ah ee dadka ku saleysan ee loogu talagalay kicinta isbeddelka bulshada ee malaayiin dad ah oo ku nool adduunka soo koraya.
Muddadii ay shaqeyneysey, EAI waxay ka kortay hal barnaamij oo ay ku gaartay in ka badan 200 milyan oo qof oo ku kala baahsan Aasiya, Afrika, iyo Bariga Dhexe, in kabadan 75 milyan oo firfircoon / dhagaystayaal joogto ah iyo daawadayaal ah iyo ka-qaybgalayaal ka badan 100,000 ka-qayb-galka howlaha dhexgalka bulshada iyo aaladaha warbaahinta bulshada oo ay ka mid yihiin SMS iyo jawaabta codka isdhaafsiga ah (IVR).
Waqtigaan la joogo, Ms. Goldfarb waa Machadka Faa'iidada Bulshada ee Caalamiga ah (GSBI) - Miller Center for Social entrepreneurship Fellow waxayna hada kaqeybqaadaneysaa weheliso xawaare sare oo diiradda saaraya horumarinta isku-darka isku-darka bulshada, macaash-doonka iyo macaashka faaiidada leh ee soo jiita kuna lug leh saameynta bulshada maalgashiga. Waxay sidoo kale u adeegtaa Agaasime Guddi ee Shabakadda AREWA24. 2010, Ms. Goldfarb waxaa u magacaabay Xoghayaha Arimaha Dibada ee Clinton inay noqoto Wakiilka Waxbarashada ee Komishanka Qaranka ee UNESCO.
Kahor intaan la aasin EAI, Ms. Goldfarb waxay abuurtay oo ay hirgalisay dadaallo isgaarsiineed, munaasabado warbaahinno badan, iyo barnaamijyo loogu talagalay Fortune 500 Corporations iyo Hay'adaha UN. Ms. Goldfarb waxay haysataa shahaadada koowaad ee cilmiga farshaxanka ee SUNY Buffalo waxayna wax ku baratay Cilmiga Dhaqanka Anthropology ee Jaamacadda New York, iyo Machadka Iskuulka Filimka NYU iyo Dugsiga Farshaxanka Muuqaalka.